बायोड्रेल उत्पादन & बायोडीजेल रूपान्तरण - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
जब तपाइँ बायोडाइडल, ढिलो प्रतिक्रिया केनेटिटिक्स र खराब जन स्थानान्तरण गर्नुहुन्छ तपाईंको बायोडीडेल संयन्त्र क्षमता र तपाईंको बायोडिडेल उपज र गुणस्तर कम हुन्छ। Hielscher अल्ट्रासोनिक रिएक्टरहरु ट्रांसस्ट्रेसिसिन केनेटिटिक्स मा सुधार गर्दछ। यसैले कम से कम मेथेनॉल र कम उत्प्रेरक को आवश्यकताहरु लाई जैव ईसाइड प्रसंस्करण को लागि आवश्यक छ।
Biodiesel हो सामान्यतया ब्याच रिएक्टरहरूमा उत्पादन गरिन्छ गर्मी इनपुट र ऊर्जा इनपुट को रूप मा यांत्रिक को उपयोग। अल्ट्रासोनिक सावधानीत्मक मिश्रण एउटा हो प्रभावकारी विकल्प वाणिज्यिक बायोडाइडल प्रोसेसिंग मा एक बेहतर मिश्रण प्राप्त गर्न को मतलब। अल्ट्रासोनिक cavitation औद्योगिक biodiesel ट्रांजस्टरिस को लागि आवश्यक सक्रियता ऊर्जा प्रदान गर्दछ।
Transesterization (रासायनिक) biodiesel रूपान्तरण)
सब्जीको तेलबाट विनिर्माण बायोडेलल (जस्तै सोया, Canola, jatropha, सूरजमुखीको बीउ वा अल्गा) वा पशु वसा, बेस-कैटेलियज समावेश गर्दछ फैटी एसिडको ट्रास्जिस्टरिस मिथानोल वा इथेनॉल संग सम्बन्धित मिथाइल एस्टर वा एथिल एस्टर्स दिन। ग्लिसरिन यो प्रतिक्रियाको अपरिहार्य बिरुवा हो।
पशु वसाको रूपमा सब्जीको तेल ट्राइग्लिसराइड्स हुन् जुन फैटी एसिडको तीनवटा भागहरु जुन ग्लिसिनिन अणु द्वारा बाँधिएको हुन्छ। ट्रिग्लिसराइड एस्टरहरू छन्। एसिड एसिडहरू छन्, फैटी एसिड जस्तै, एक शराबसँग संयुक्त। ग्लिसरीन (= ग्लिसरील) एक भारी अल्कोहल हो। रूपान्तरित प्रक्रिया ट्रिग्लिसराइडाइड एस्ट्रर्स एक उत्प्रेरक (लियो) र एक शराब अभिकर्ता को प्रयोग गरेर अल्कोल एस्टर (= बायोडेसल) मा परिणत गरिन्छ। मिथाइल एस्टर बायोडेसल। मेथनोलले ग्लिसरीनलाई बदल्दछ।
ग्लिसरीन – भारी चरण – तल डल्लो हुनेछ। Biodiesel – हल्का चरण – माथि माथि निस्कन्छ र अलग हुन सक्छ, उदाहरणका लागि क्यान्ट्यानर वा सेन्टरफ्रेजले। यो रूपान्तरण प्रक्रियालाई ट्रांजिस्टर भनिन्छ।
मा पारंपरिक एस्टेरेरेशन प्रतिक्रिया ब्याच प्रोसेसिंग ढिलो हुन सक्छ, र ग्लिसरिनको चरण विभाजन समय-उपभोग गर्दै, प्राय:5घण्टा वा धेरै लिन्छ।
बायोडिजेल उत्पादनको लागि अल्ट्रासोनिक्स
"हामी Hielscher उपकरण र सेवा संग धेरै खुसी हुनुभयो र हाम्रो सबै भविष्यमा Hielscher अल्ट्रासोनिक टेक्नोलजीज सहित प्रत्येक इरादा छ।"
टोड स्टीफन्स, तुला बायोफुल्स
आज, बायोडेलल मुख्य रूपमा बैच रिएक्टरहरूमा उत्पादन गरिन्छ। अल्ट्रासोनिक बायोडीजेल रूपान्तरणले निरन्तर इनलाइन प्रशोधनको लागि अनुमति दिन्छ। अल्ट्रासोनिकेशन एक प्राप्त गर्न सक्छ biodiesel उपज 99% भन्दा बढि। अल्ट्रासोनिक रिएक्टरहरू प्रोसेसिंग समय घटाउनुहोस् पारंपरिक 1 देखि4घण्टा ब्याच प्रोसेसिंगबाट 30 सेकेन्ड भन्दा कम सम्म। थप महत्त्वपूर्ण, अल्ट्रासोनिकेशनले 60 मिनेट भन्दा कम गर्न5देखि 10 घण्टा (पारंपरिक आत्मीयताको प्रयोग) से जुदाई समय घटाउँछ। अल्ट्रासोनिकेशन पनि cavitation को उपस्थिति मा बढेको रासायनिक गतिविधि को कारण 50% सम्म आवश्यक उत्प्रेरक को मात्रा मा कमी को लागि मदद गर्दछ Sonochemistry)। अल्ट्रासोनिक प्रयोग गर्दा आवश्यक आवश्यक मेथनोलको रकम पनि कम हुन्छ। अर्को लाभ ग्लिसरीन को शुद्धता मा परिणामस्वरूप वृद्धि हो।
बायोडिजेलको अल्ट्रासोनिक उत्पादनमा निम्न चरणहरू सामेल छन्:
वनस्पति तेल वा जनावरको मोट मेथनोलसँग मिल्दिएको छ (जसले मेथिल एस्टरहरू गर्दछ) वा इथेनॉल (इथिल एस्टर्सका लागि) र सोडियम वा पोटेशियम मेथक्साइड वा हाइड्रोक्साइड
मिश्रण गर्म हुन्छ, जस्तै 45 र 65degC को बीच तापमान
गरम मिश्रण भइरहेको छ सनलाइन गरिएको इनलाइन5देखि 15 सेकेन्ड सम्म
ग्लिसरिन छोड्छ वा सेन्टरफ्रेज प्रयोग गरेर अलग हुन्छ
परिवर्तित बायोडीडेल पानी संग धोया गएको छ
प्राय: मा, sonication हो उच्च दबावमा प्रदर्शन गरियो (1 देखि 3बार, गेज दबाव) एक फिड पंप को प्रयोग गरेर र प्रवाह सेल को बगल मा एक समायोज्य फिर्ता-दबाव वाल्व को उपयोग गरेर।
औद्योगिक बायोडिजेल रूपान्तरण धेरै अल्ट्रासोनिक ऊर्जा चाहिन्छ। माथिको तालिकाले विभिन्न प्रवाह दरहरूको लागि सामान्य शक्ति आवश्यकताहरु देखाउँछ। वास्तविक ऊर्जा को आवश्यकता एक प्रयोग गरेर निर्धारण गर्न सकिन्छ बेंच-शीर्ष मापमा 1kW अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर। यस्तो बेंच-शीर्ष परीक्षणहरूको सबै परिणाम हुन सक्छ सजिलै उचाइयो। आवश्यक भएमा, FM र ATEX-प्रमाणित अल्ट्रासोनिक यन्त्रहरू उपलब्ध छन्, जस्तै UIP1000-Exd।
हेलस्चर आपूर्ति औद्योगिक अल्ट्रासोनिक biodiesel प्रसंस्करण उपकरण, दुनिया भर मा। माथिको अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरहरूसँग 16kW पावर प्रति एकल उपकरण, त्यहाँ बायोडीडेल प्लान आकार वा प्रसोधन क्षमतामा कुनै सीमा छैन।
अल्ट्रासोनिक बायोडाइडले निर्माणको लागत
अल्ट्रासोनिकेशन वृद्धि गर्न प्रभावकारी माध्यम हो प्रतिक्रिया गति र रूपान्तरण दर वाणिज्य बायोडिजेल उत्पादन मा। अल्ट्रासोनिक प्रसोधन लागत परिणाम मुख्यतः लगानीबाट
अल्ट्रासोनिक उपकरणहरू, उपयोगिता लागत र रखरखावको लागि। बकाया ऊर्जा दक्षता (दाँयामा चार्टमा क्लिक गर्नुहोस्) Hielscher अल्ट्रासोनिक उपकरणहरु को उपयोगिता को लागत को कम गर्न मा मदद गर्दछ र यसको द्वारा यो प्रक्रियालाई पनि चिकन बनाउनुहोस्। अल्ट्रासोनिकेशन को परिणामस्वरूप लागत फरक छ 0.1ct र 1.0 सीट प्रति लीटर (0.4ct देखि 1. 9ct / गैलन) जब व्यापारिक स्तरमा प्रयोग गरियो। को बारे मा अधिक जानकारी पढ्नुहोस् अल्ट्रासोनिक प्रशोधन लागत।
हेलसेस्टर अल्ट्रासोनिक्सले प्रतिष्ठित फ्रस्ट प्राप्त गरे & जैव-डीजल उत्पादनका लागि उपन्यास अल्ट्रासोनिक्स टेक्नोलोजीको विकासको मान्यतामा वर्षौंको सुलिवान टेक्नोलोजी अभिनव। थप पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
Biodiesel सानो स्केल अल्ट्रासोनिक सेटअप
अल्ट्रासोनिकेशनले तेलको रूपान्तरणको लागि कुनै पनि स्तरमा बायोडेरेलमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। दायाँतिरको तस्वीर (ठूलो दृश्यको लागि क्लिक गर्नुहोस्!) 60-70L को प्रोसेसिंग (16 देखि 19गैलन) को लागी एक सानो स्केल सेटअप देखाउँछ। यो प्रारम्भिक अध्ययन र प्रक्रिया प्रदर्शनको लागि सामान्य सेटअप हो।
यो सेटअपमा निम्न भागहरू हुन्छन्:
एक 500 वाटहरू वा 1000 वाटहरू अल्ट्रासोनिक उपकरण (20kHz) बूस्टर, सोनोट्रोड र प्रवाह सेल संग
पावर मीटर माइटरिंग पावर र ऊर्जाको लागि
80L प्रसोधन ट्यांक (प्लास्टिक, जस्तै एचडीपीई)
हीटिंग तत्व (1 देखि2किलोवाट)
10L उत्प्रेरक प्रीमिक्स टैंक (प्लास्टिक, जस्तै एचडीपीई)
उत्प्रेरक प्रिमिक्सर (स्टिरर)
लगभगको लागि पंप (अपकेंद्रित्र, मोनो वा गियर)। 10 देखि 20L / मिनेट मा 1 देखि3barg
प्रवाह कक्षमा दबाब समायोजनको लागि ब्याक-दबाब वाल्व
दाउद दाउराको मापनको लागि दबाव गेज
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड (0.2 देखि 0.4 किलोग्राम, उत्प्रेरक) लगभग लगभग भंग भएको छ। 8.5 एल उत्थान पूर्व-मिश्रण ट्यांकमा मेथनोल। यसले उत्प्रेरक प्रिमिक्सको उत्थान गर्न आवश्यक छ। प्रोसेसिंग ट्यांक 66L वनस्पति तेल भरिएको छ। तेल ताप्लेट तत्वले 45 देखि 65degC सम्म गरम गरिन्छ।
जब उत्प्रेरक मेथनोल मा पूरी तरह भंग भयो, उत्प्रेरक प्रीमिक्स गरम तेल संग मिश्रित हुन्छ। पंपले प्रवाह कक्षमा मिश्रणलाई फीड गर्दछ। ब्याक-दबाब वाल्वको माध्यमबाट, दबाव 1 देखि3बिग (15 देखि 45 सेन्सिग सम्म) समायोजित हुन्छ। अल्ट्रासोनिक बायोडीइडेल रिएक्टर को माध्यम ले पुन: प्राप्ति लगभग अनुमान को लागी गर्नु पर्छ। 20 मिनेट। यस समयमा, तेल बिइयोडेलमा परिवर्तित भइरहेको छ। यसपछि, पंप र अल्ट्रासाउन्ड बन्द छन्। ग्लिसरिन (भारी चरण) बायोडाइडल (हल्का चरण) बाट अलग हुनेछ। विभाजन लगभग लेन्छ। 30 देखि 60 मिनेट। जब अलगाव समाप्त भयो, ग्लिसरीन नाली हुन सक्छ।
कन्फिगरेटेड बायोडेरेलले अशुद्धताहरू जस्तै, धुलाई आवश्यक छ। धुलाई को लागि, पानी बायोडाइडल मा मिलाएको छ। अल्ट्रासोसनले पानीको साथ बायोडीडेलको मिश्रणलाई लाभ पुऱ्याउन सक्छ। यसले बूबल आकारको कमीको परिणामको रूपमा सक्रिय सतह क्षेत्र बढाउँछ (हेर्नुहोस्: अल्ट्रासोनिक पाउडर)। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि धेरै तीव्र ध्वनिकरणले पानीको बूढी आकारमा घटाउन सक्छ, जुन लगभग स्थिर पायसन गठन गरिएको छ जुन विशेष माध्यमहरू (उदाहरणको रूपमा केन्द्रितरण) लाई अलग गर्न आवश्यक पर्दछ।
बायोडाइडल निर्माण संयंत्र
तलको प्रवाह चार्टले बायोडिसेलमा रूपान्तरणको लागि तेलको इन-इनन इन्जिनकरणको लागि एक साधारण सेटअप देखाउँछ। चार्टमा क्लिक गर्नुहोस् ठूलो दृश्य प्राप्त गर्न।
सतत बिरोधील प्रसोधन र विभाजन
यसको लागि एक सेटअपमा लगातार biodiesel प्रसंस्करण र निरन्तर विभाजन, गरम तेल र उत्प्रेरक प्रीमिक्स लगातार समायोज्य पंप प्रयोग गरेर एक साथ मिश्रित हुन्छ। एक इनलाइन स्थिर मिक्सर अल्ट्रासोनिक रिएक्टर मा फीड को एकरूपता को सुधार गर्दछ। तेल / उत्प्रेरक मिश्रणले प्रवाह सेललाई गुजराउँछ, जहाँ यो अल्ट्रासोनिकबाट उजागर भएको छ अनुमानको लागि cavitation।5देखि 30 सेकेन्ड। एक ब्याक-दबाब वाल्व प्रवाह कक्षमा दबाब नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ। सोनिकयुक्त मिक्सले माथिको रिएक्टर स्तम्भमा प्रवेश गर्छ। रिएक्टर स्तम्भको भोल्युम अनुमान लगाउन डिजाइन गरिएको छ। स्तम्भमा 1 घण्टा अवधारण समय। त्यस समयमा, ट्रांजिस्टरेशन प्रतिक्रिया पूरा भएको छ। प्रतिक्रिया गरिएको ग्लिसरीन / बायोड्रेल मिक्स अप्रेष्टिगजमा पम्प गरिएको छ जहाँ यो बायडेलल र ग्लिसरीन अंशहरूमा विभाजित हुन्छ। पोस्ट प्रोसेसिंग माथानोल पुन: प्राप्ति, धुलाई र सुखाने को लागी शामिल छ र लगातार पनि गरिन सक्छ।
यो सेटअप बेइडेलेल रिएक्टर ब्याचहरू मेटाउँछन्, परम्परागत आवेदकहरू र ठूला विभाजक टैंकहरू।
Biodiesel ट्रांजिस्टरेशन प्रतिक्रिया गति
तल चित्रण रेजेसेड तेल (औद्योगिक ग्रेड) को ट्रांजिस्टरेशन को सामान्य परिणामहरु लाई देखाउँछ सोडियम मेथक्साइड (बाँया) र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड (दाँया)। दुबै परीक्षणहरूको लागि, एक नियन्त्रण नमूना (निलो रेखा) तीव्र मेकेनिकल मिक्सिङमा अवस्थित थियो। रातो रेखाले भोल्युम अनुपात, उत्प्रेरक एकाग्रता र तापमानको सन्दर्भमा समान संरचनाको sonicated नमूनालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। क्षैतिज अक्षले क्रमशः मिश्रण वा सोनियम पछि समय देखाउँदछ। ऊर्ध्वाधर अक्ष तल निस्किएको ग्लिसरीन को भोल्युम देखाउँछ। यो प्रतिक्रिया गति को मापने को एक आसान तरीका हो। दुवै चित्रमा, सान्दर्भिक नमूना (रातो) भन्दा धेरै छिटो प्रतिक्रिया गर्दछ नियन्त्रण नमूना (नीलो)।
Biodiesel आपूर्तिहरु को लागि लिंक
पम्पहरूको आपूर्तिकर्ताहरू र बायोड्रेल उद्योगका लागि टैंकका लागि लिङ्कका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
रासायनिक र सुरक्षा जानकारी
जटिलता र प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावहरू रोक्न कृपया तलका जानकारीहरू सावधानीपूर्वक पढ्नुहोस्।
मेथनॉल विषाक्त हुन्छ। यसले लामो समयको उपयोगको परिणामको रूपमा तंत्रिका खराब हुन सक्छ। यो पनि छालाबाट उडाउन सकिन्छ। यदि आँखामा भत्कियो भने यसले अन्धाकार हुन सक्छ र मेथिनोलले निलम्बन गर्दा घातक हुन सक्छ। यस कारणको लागि, मेथनोललाई हस्तान्तरण गर्दा आवश्यक सावधानीहरू लिनुहोस्। यो राम्रो श्वेताटर, एप्रन र रबड दस्ताने को उपयोग गर्न को लागि सिफारिश गरिन्छ।
पोटेशियम हाइड्रक्साइड (KOH) विषाक्त हुन्छ र यसले सम्पर्कमा छाला जलाउँछ। राम्रो वेंटिलेशन आवश्यक छ।
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि कार्यक्षेत्र उदारतापूर्ण छ र राम्रो तरिकाले भित्तालाई भाग्न अनुमति दिन्छ। भाप कारतूस श्वेतकर्ता मेथनोल धूमिलका विरुद्ध प्रभावकारी छैन। एक आपूर्ति वायु प्रणाली (एससीएबी) — आत्म-ब्रेन्टेड ब्रेथिंग उपकरण) मेथनोल वाष्पहरू विरुद्ध राम्रो सुरक्षा प्रदान गर्दछ।
बायोडिसेल र रबड पार्ट्स
लामो समयको लागि 100% बायोडाइडलमा दौडिनुको कारण इन्जिनको रबड भागहरू (पंप, होसहरू, ओ-बजहरू) बिग्रेको हुन सक्छ। इस्पातको भाग वा भारी शुल्क रबरले प्रतिस्थापनलाई यो समस्या हटाउन सक्छ। वैकल्पिक रुपमा तपाईं लगभग मिलाउन सक्नुहुनेछ। तपाईंको biodiesel मा 25% पारंपरिक (जीवाश्म) डीजल जटिलताहरु लाई रोक्न।
बायोडिसेल, जस्तै रेपिसेड मेथाइल एस्टर (RME) एक अक्षय र biodegradable ईन्धन हो। जब प्रत्यक्ष सिग्नेबल तेल (एसटीओ) भन्दा तुलनामा बायोडिडेलले धेरै फाइदाहरू छन्। यो परम्परागत डीजल इन्जिनमा बायोडिडेल चलाउन कुनै ईन्जिन रूपान्तरण वा ईन्धन प्रणाली परिमार्जन आवश्यक पर्दछ। Biodiesel लाई सामान्यतया शुद्धता को स्नेहन को बढाने को लागि पंपहरुमा बेचे जाते पेट्रोइडेल मा जोडिएको छ अल्ट्रा कम सल्फर डीजल (यूएलएसडी), जो फायदेमंद छ किनभने बायोडिडेलले लगभग कुनै सल्फर सामग्री छैन।
अल्ट्रासोनिक रिएक्टरले Biodiesel प्रक्रिया क्षमता सुधार गर्छ